Ileta Evela KwiQumrhu Elilawulayo LamaNgqina KaYehova | Incwadi Yonyaka Ka-2016
Bazalwana Noodade Abathandekayo:
Umprofeti uIsaya ngokuthobeka wavuma ukuba nayiphi na impumelelo yoBukumkani bakwaYuda, yayiyintsikelelo evela kuYehova. Njengoko sifunda kuIsaya 26:12 wathi: “Owu Yehova, . . . kwanemisebenzi yethu yonke usenzele.” Xa sijonga oko kuye kwaphunyezwa kunyaka wenkonzo ophelileyo nathi sitsho loo mazwi. Ngokwenene uYehova wenza “izinto ezimangalisayo ezingazange zidalwe [zibekho]” ngaphambili! (Eks. 34:10) Khawucinge ngezinye zeentsikelelo asiphe zona.
Iwebhsayithi yethu esemthethweni, i-jw.org/xh iye yasetyenziswa ngendlela emangalisa ngokwenene. Ngoku ifumaneka ngeelwimi ezingaphezu kwe-600, kunokufundwa okanye kukhutshelwe iimpapasho ngeelwimi ezingaphezu kwe-750. Ibanceda ngokwenene abantu abayifuna ngokunyanisekileyo inyaniso. Khawucinge ngoku: Esinye isibini sadaniswa luhanahaniso oluselunqulweni. Sabona iwebhsayithi yethu xa sasikhangela eyona ndlela yokunqula uThixo. Saqalisa ukumana sifunda amanqaku kwiimpapasho zethu, sibukela neevidiyo kule webhsayithi. Sade sakhuphela nencwadana ethi Ukuhlolisisa IZibhalo Imihla Ngemihla saza saqalisa ukuthatha itekisi yosuku nabantwana baso ababini abakwishumi elivisayo. Ngenye intsasa amaNgqina kaYehova afika sisenza kanye oko. Afumanisa ukuba ngenxa yokufunda izinto ezikwiwebhsayithi yethu, le ntsapho yayisele itshintshe izinto ezininzi ebomini bayo. Yasusa iitattoo kunye namacici awayesemzimbeni, yatshabalalisa imifanekiso yokunqula, yayeka ukubhiyozela iiholide zehlabathi nokubukela iimuvi ezingafanelekanga—konke oku yakwenza ngaphambi kokuba idibane namaNgqina! Ngexesha lokubhalwa kwale leta, abazali kunye nomntwana omnye, bonke bebesele bengabavakalisi yaye abazali bafuna ukubhaptizwa kungekudala.
Abaninzi baye basibulela nangelinye ilungiselelo elihle: Ijelo Losasazo LamaNgqina. Iinkqubo zenyanga zinokubukelwa ngeelwimi ezingaphezu kwe-70, kwaye ziseza kufumaneka nangezinye iilwimi ezingakumbi. Iintsapho ezininzi ziyibukela ngengokuhlwa yoNqulo Lwentsapho. Omnye umzalwana wathi, “Nangona intlangano kaYehova iye yakhula kakhulu zange sizive sisondele kangaka kwikomkhulu lethu!”
Iindibano zisoloko ziyindumasi kubantu bakaYehova, bekunjalo ke nangezonyaka wenkonzo ka-2015. Kwezi ndibano kuboniswe iividiyo kunye nemifanekiso ezotywayo eyi-42, kwadlalwa neengoma ezimyoli ezintandathu ngaphambi kokuba kuqale inxalenye nganye yocwangciso. Omnye umzalwana onamava wathi xa ethetha ngolu cwangciso, “Kwakubonakala ukuba akakho owayefuna ukuya naphi na ngoxa ucwangciso luqhubeka, kwakungekho mntu ufuna ukuphoswa nayenye into.” Omnye umthunywa wevangeli yena wathi, “Ezi vidiyo zenze inyaniso noBukumkani zaba yinto yokwenene kum.”
Kulo nyaka uphelileyo, uYehova uye wasisikelela nangeengoma zoBukumkani ezintsha. Esinye isibini sabhala sathi: “Ezi ngoma zintsha zenza ube ngathi wangiwa nguYehova. Ziye zisithuthuzele ngamaxesha anzima.” Iindibano zethu ziye zasikhumbuza nangendlela abadlali bezixhobo zomculo kunye nekwayara yeWatchtower abaye basebenza nzima ngayo ngenxa yokuba besithanda, konke oku bekwenzela ukuba kudunyiswe uYehova!
Sinikhuthaza nonke ukuba nixelise uYehova, nibamkele ngothando bonke abo babuyela kuye
Ngaba ibandla lakho liyazisebenzisa iitroli zokushumayela esidlangalaleni? Le ndlela yokushumayela ingqineke iyintsikelelo ngokwenene! Kuye kwafikelelwa nakubantu abangazange bayive inyaniso ngenxa yokuba behlala kwizakhiwo ezinamasango atshixwayo nezibiyelwe ngeendonga eziphakamileyo. NamaNgqina apholileyo aye afumana uncedo lokomoya kusetyenziswa le ndlela yokushumayela. NgoJanuwari 2015, enye indoda kuMzantsi Korea yaya apho itroli imise khona. Yathi, kutshanje iye yaqalisa ukucinga nzulu ngoThixo. Kwaqaliswa isifundo seBhayibhile kunye nayo. NgoFebruwari, yaqalisa ukuya kwiintlanganiso; ngoMatshi yayeka ukutshaya. NgoAprili, yatyelela isebe lakuMzantsi Korea, yaye yenza inkqubela emangalisayo ngokomoya. La ngamava nje omntu omnye kwamaninzi esiwafumeneyo apha kwikomkhulu lehlabathi.
Sithandezela ukuba incwadana ekhululwe endibanweni ingafikelela iintliziyo zabo bapholileyo baze babuyele kwiingalo ezinothando zikaYehova ngaphambi kokuba bashiywe lixesha! Sinikhuthaza nonke ukuba nixelise uYehova, nibamkele ngothando bonke abo babuyela kuye.—Hez. 34:16.
UYehova uye wabasikelela ngokwenene abantu bakhe kulo nyaka wenkonzo uphelileyo. Yintoni eza kulandela ngoku? Kuza kufuneka silinde. Okwangoku, qinisekani ukuba thina beQumrhu Elilawulayo sinithanda kakhulu yaye sinithandazela rhoqo.